म किन धनी छु, किनकि मसँग स्तन र योनी छ ! – Gandaki Media
म हरेक गल्लीमा असुरक्षित छु आमा
त्यो सडक,घर, स्कुल, कलेज, चिया पसल
सबै सबै ठाउँमा ।
तिमी सोच्छौ होला आमा
सुनचाँदी, पैसा केही छैन छोरीसँग
कसरी असुरक्षित हँ ?
तर थाहा छ आमा तिमीलाई
आजभोलि छोरीसँग लुटिन धन हैन नी
स्तन र योनी हेरिन्छ ।
अनि आमा सानो हुँदा सकी नसकी
छोप्ने गरेका मेरा संवेदनशील अंगलाई
आजभोलि जताततै उदाङगो बनाइन्छ
टोकिन्छ,काटिन्छ चलाइन्छ ।
आमा म पनि धेरै धनी छु नि
मसँग पनि स्तन र योनी छ
यसैले त म असुरक्षित छु ।
यसैले आमा म जुनसुकै बेला
अन्त्यमा विक्षिप्त भएर
पानीसमेत भन्न नपाई सधैको लागि निदाउँन सक्छु
आमा म अहिले नै भन्छु नि
तिमी नरुनु है
बस चुपचाप चित्ता जलाउनू
किनकि तिमी गरीब छौं
न्याय किन्न सक्दिनौं मेरो लागि ।
म हरेक समय
हरेक ठाउँमा असुरक्षित छु ।
बलात्कारको आरोपमा विहे गर्दागर्दै दुलाहा पक्राउ